Izithembiso ZoBukumkani—Zonke Izinto Zenziwa Ntsha | UBukumkani bukaThixo
Ngaba uyakulangazelela ukubona izithembiso zoBukumkani zizaliseka?
Izithembiso ZoBukumkani—Zonke Izinto Zenziwa Ntsha
UKHA emthini iapile elikhulu nelivuthwe kamnandi. Uva ivumba lalo elimnandi ngaphambi kokuba ulibeke kwamany’ amaninzi akwingobozi yakho. Sekulithuba noko usebenza, kodwa uziva usesemandleni, kwaye usakulungele ukusebenza. Nankuya umama wakho kumthi okufuphi, encokola kamnandi namanye amalungu entsapho kunye nabahlobo abanincedisayo kulo msebenzi wokuvuna. Indlela abonakala esemtsha ngayo—ulolwahlobo wayelilo kudala ngokuya wawusengumntwana. Kunzima ukukholelwa ukuba wawumbukele esaluphala kwihlabathi esele ladlula. Wawumbukele egqitywa kukugula, wawubambe isandla sakhe ukuphefumla kwakhe okokugqibela, wasitsh’ isijwili xa wayengcwatywa. Kodwa ngoku, nanku phambi kwakho, ekunye nabanye abaninzi, engumqabaqaba yaye onwabile kwakhona!
Siqinisekile ukuba iintsuku ezinje ziyeza. Siqinisekiswa kukuba izithembiso zikaThixo, zihlala zizaliseka. Kweli candelo siza kuthetha ngezinye zezithembiso zoBukumkani eziza kuzaliseka kungekudala, ezisingisa kwimfazwe yeArmagedon. Siza kuthetha nangezinye izithembiso ezibangel’ imincili eziza kwenzeka emva koko. Siza kuvuya ngokwenene xa kulawula uBukumkani bukaThixo kuwo wonke lo mhlaba, esenza zonke izinto zibe ntsha!
Ungazilungiselela imfazwe yeArmagedon ngoku.
Unokuqiniseka njani ukuba izithembiso zikaYehova ziza kuzaliseka?